615 online! | Sidvisningar idag: 155 589 | Igår: 185 081 |
44 ufele zokudubula ukuza kuthi ga kulo nyaka e Sweden
Ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka kubekho 44 nokudubula ezibulalayo eSweden. Ingxelo ukusuka kunyaka ophelileyo kunye 43 abafileyo imfazwe.
Handbook Church buyayigqwetha ubuhlobo yeBhayibhile kubudlelwane gay
Le ncwadana ibandla elitsha buyayigqwetha amabali zeBhayibhile kuquka ubufanasini kwicandelo mitshato. Bathi ukuba ubuhlobo phakathi koDavide noYonatan kunye uRute noNahomi malunga nobudlelwane gay.
Ngaba ukuqonda iimpawu?
Ngu Mikael Walfridsson Ngokufundisisa imiqondiso yamaxesha, sinokuqiniseka ngayo, ukuba siphila kwixesha nokuzaliswa elizayo. Uyintoni na ngoko umlinganiswa ukuba kubalulekile ukuba simazi kwaye uzive amaxesha siphila kulo?
Ngaba nesibindi sokucinga?
AI - basemoyeni - inzaliseko iBhayibhile kwiminyaka eyi 2000 eyadlulayo
Ngoku kwenzeka ngesantya breakneck yi AI, ubukrelekrele eyenziweyo (basemoyeni), kwaye sele ziphuhlisiwe ukuthetha nokucinga iirobhothi. Ubhala le ukoyikisa, kodwa ukuba uqaphele ukuba kwiminyaka 2,000 eyadlulayo iBhayibhile yazixela kude kangakanani ukuba uphuhliso lobuchwepheshe, ngoko sinelungelo ukubonisa ixesha!
UN nte ekhohlisayo kuvunyiwe izolo
Photo: ixesha Free.
Izolo ke sivunyiwe Immigration Pact loMbutho weZizwe eziManyeneyo, isimiso, vula emideni yabo okuya kwamanye amazwe free. Kodwa njengoko esidlweni Nobel namandla izolo wanyamalala isivumelwano ngokwembali kakhulu UN kwi ingxolo kumajelo eendaba.
A umbono iziqhamo lokugqibela umthi wokwazi
Oku kuvakala ndidakumbe, kodwa oku Ixesha inamandla Contemporary Umlinganiswa sifunda ngazo kule mbono kunye eBhayibhileni, yaye kufuneka asenze sibe ilungelo yokuTolika Ixesha!
Mail Reader ngu David B Alithandabuzeki elokuba, hlokondiba bekhwaza besithi: Mbetheleni, emnqamlezweni, abalandeli bakaYesu yaye oko uYesu limele. Baya ke kuphulukana azikhangele ukuba abaziqondi ukuba ngokudubula bema ngeenyawo.
Islam usolule ngoncedo yeBandla Swedish
Christer Åberg uya ngenxa ndaba mlonyeni. Akukho mathandabuzo ukuba siphila kwimihla yokugqibela, xa uthatha ezinye ezi ndaba.
Xa ibinzana ngasentla, umntu abize bonke abo bacinga ukuba ixesha likufuphi kwaye uthatha iziphumo zaso.
Amazulu ezintathu eBhayibhileni
Xa indinyana yokuqala yeBhayibhile ithi kumbhalo wantlandlolo ukuba uThixo wadala izulu nomhlaba. UThixo wadala izulu ngaphezulu.
Sweden cash-free kwisithuba seminyaka emithathu ukuya kwemihlanu - isiprofeto seBhayibhile sazaliseka
"Sweden iya kuba 'ikheshi' kwisithuba seminyaka emithathu ukuya kwemihlanu", watsho iRhuluneli Vice uCecilia Skingsley kwinkomfa imali e London.
UYesu weza yaye uza kubuya kwakhona
Silindele ukuba uYesu yesibini uyeza, hayi kuqala. Kwaye oku ukufika akayi kuba ixesha elide. Kodwa xa uYesu ebuyele izintya, uya kuba nayo into yena yayingesosihlandlo sokuqala ukuba eze. Ngaba uyazi ukuba yintoni loo nto kuba nantoni na?
Xa kusindiswa, usinde?
Kalvanistpstorn Pastor John Loopez anikwa nguNdikhoyo ukuze sibone indlela bobuxoki le mfundiso.
Komhlaba Alaska - uYesu iziprofeto kuzaliseka
Alaska iye ezithwaxwa iinyikima kakhulu ezimbini. Ingena kakuhle xa owazixelayo unxunguphalo yentlekele. UYesu athethe iinyikima zomhlaba ezinkulu ukuba zenzeke. Masithandazele xa hit.
Siprofeto uXwilo kunye olukhulu
Uyaprofeta eBhayibhileni ukuba xesha liya noxhwilo kuqhubeka kwaye agciniwe uye wandisa emagumbini ngelixa imbandezelo na inkqubela on Earth.
Yena ke ozibandakanye a chandelier
Amanda Liberty eganelwe a chandelier ukuba "uthanda ndibange kwaye ndiwawole nayo."
TV christian imijelo e Sweden
Kukho Swedish abaninzi abangamaKristu amajelo TV entle eSweden. Zombini abahamba phezu satellite, cable kunye Web! Inika uluhlu onke amabakala.
Akukho ukuvumela ebumnyameni
Mail Reader ngu Sigvard Ngekrele
Xa outreach inkonzo yam kuThixo ngoko, loo nto iye ngeemeko ezininzi kakhulu apho umzimba wam kunye umphefumlo wam babusesichengeni. yosongo Ukufa ukusuka zeniyo-amaNazi kuba ndema nefihlakeleyo neembacu, kufutshane kakhulu wentambo sexkriminalitetens ubumnyama ngokusebenzisa meko esweni, besvärjd kwaye umngeni ukuba zokucwangcisa, ngokomoya occultists.
oneminyaka engama-69 ubudala ufuna ukutshintsha yobudala ukuya 49
I-Emile Ratelband oneminyaka eli-69 ubudala eNetherlands ufuna ukufumana Hard yazo esemthethweni engama-49.
"UYesu Kristu andithi hlasi kwiminyaka 27 ubufanasini"
ubungqina strong kaDavide indlela usindiswa kwaye kusindiswa uYesu engama-27 ubufanasini. umbhalo Swedish.
- Igama lam ngu uDavide, Ndineminyaka engama-44 ubudala, yaye oku kube bubungqina wendlela uYesu Wandihlangula bethabathela kominyaka imashumi mabini anesixhenxe ubufanasini. Ndithetha ngothando.
Troendedöparna utshiswe, antywiliselwa, wamnqumla
Baninzi abo baye batshutshiswa, entolongweni wambulala abaye izenzo yezibhalo amakholwa-Ubhaptizo ngokuntywiliselwa.
Ubhaptizo: phi, nini kwaye njani
Apha ndininika kwenziwe ezinye iZibhalo ecacileyo yobhaptizo, xa kwenziwa njani.
Ngaba UThixo weBhayibhile iyafana uthixo iKoran kaThixo?
"Abo abathi bayamthanda, nembeko, amnqule uThixo, musa enyanisweni ukuba ngaba uthando, imbeko unqulo Yesu."
Wayithatha bumbano Hatsune Miku
Akihiko Kondo ephethe inguqulelo unodoli yehologram Hatsune Miku ngubani watshata. Umthombo Image: Facebook.
Indoda eneminyaka engama-35 ubudala yaseJapan utshate enye hologrom. Umtshato malini 160.000 ngezithsaba. A unodoli emele inkqubo yekhompyutha ababhinqileyo.
Ezulwini TV7 abazinikele e Uppsala
producer TV URuben Agnarsson, ngumseki kunye nomongameli Martti Ojares, umphathi channel UDaniela Persin kunye Christer Åberg.
Ndamenywa ukuba ijelo kamabonwakude Christian Ezulwini TV7 kaThixo studio lokuvula in Uppsala.
Jesus triple uloyiso kwihlabathi-yimbali
Jesus triple uloyiso kwihlabathi-zembali, isipho sikaThixo kubo bonke abantu behlabathi. Ukuba uYesu Kristu awayeyenza Intlawulo Yakhe kwaba Uloyiso ibonwe bo! Olona celomngeni iindawo 3 eyahlukeneyo ukuba phambi kukaThixo yeyona nomgwebi phambi: Kufuneka Ihlabathi moya kuphumelela.
komhlaba Flat zibhalweni
DVD entsha! Imibuzo neempendulo malunga amaxesha ekupheleni neziganeko yayo
Ngoku ithuba lokuba athathe inxaxheba kule DVD entsha malunga iziganeko lokuphela kwexesha.
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 458 489 280 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 059 bloggartiklar, 92 305 kommentarer och 60 502 bönämnen.